တက် စ လာ ရှန်ဟိုင်း စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကိုအပြည့်အဝ ပြန်လည်စတင် ခဲ့သည် - Pandaily
Jun 13, 2022, 16:44ညနေ 2022/06/13 23:26:47 Pandaily
တနလၤာေန႔က သတင္းတပုဒ္ အရတရုတ် စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းTesla China က ရှန်ဟိုင်း စက်ရုံ ကြီး ပြန်လည် လည်ပတ် ချိန် မှစ၍ ကား အစီးရေ ၄၀, ၀၀၀ ကျော် ထုတ်လုပ် ခဲ့ပြီး စွမ်းရည် အသုံးချ မှုနှုန်းသည် ၁၀၀% အထိရှိ သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အရSTCNTesla Shanghai စက်ရုံ၊ SAIC Passenger Car Lingang New Area Plant နှင့်အခြား OEMs များသည် နှစ်ဆ ထုတ်လုပ်မှုကို ပြန်လည်စတင် ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်ကို ထပ်မံ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အဓိက OEM များ၏ မောင်းနှင် မှုကြောင့် တစ်ချိန်က ရပ်တန့် ခဲ့သော မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်း နယ်ပယ် သည်လည်း ပြန်လည်ထူထောင် နေသည်။ “ဖောက်သည် တွေ စိုးရိမ် နေ ရုံတင် မက ဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ လဲ စိုးရိမ် နေ ကြတယ်၊ လောလောဆယ် မှာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု လုံးက မြန်မြန် လုပ် နေတယ်” ဟု ရှန်ဟိုင်း အခြေစိုက် စက်ရုံ တစ်ခုမှ ကား အပိုပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ အကြီးအကဲ က ပြောသည်။
Tesla ကဲ့သို့သော ထိပ်တန်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အလုပ် ပြန်လုပ် ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ပြန်လည်စတင် ရာတွင် ကြုံတွေ့ ရသော အခက်အခဲများ ကိုဖြေရှင်း နိုင်ရန်အတွက် ရှန်ဟိုင်း အစိုးရ သည်အထူး အစည်းအဝေး များ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Lingang New District သည် Tesla နှင့်အတူ အလုပ် အဖွဲ့ များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပါတီ အားလုံး ၏အားသာချက်များကို ညှိနှိုင်း ခဲ့သည်။ ပါတီ များအားလုံးကို ညှိနှိုင်း ရန် “စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုစီအတွက် မူဝါဒ တစ်ခု” ကို ချမှတ် ပါ။
တက် စ လာ တွင်တရုတ် နိုင်ငံတစ် ဝှမ်း တွင် ရာနှင့်ချီ သော ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ များအပြင် ပြည်ပ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် များစွာရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာန များ သည်အဓိက အစိတ်အပိုင်းများနှင့် သိုလှောင် ခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး များ ကိုမောင်းနှင် ခြင်းနှင့် တိုးမြှင့် ခြင်းအားဖြင့် စက်မှု ကွင်းဆက် ကိုပြန်လည် စတ င်ရန် တက် စ လာ ၏ ပြန်လည်စတင် ခြင်း နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၉ ရက်က China Passenger Car Association မှ ထုတ်ပြန်သော ကား အရောင်း အချက်အလက်များအရ တက် စ လာ သည် မေလတွင် ကား အစီးရေ ၃၂, ၁၆၅ စီး ရှိပြီး ၂၂, ၃ ၄၀ စီး တင်ပို့ ခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ မှ မေ လအထိ တက် စ လာ ၏စုစုပေါင်း တင်ပို့ မှုမှာ ၂ ၁၅, ၈ ၅၁ စီး ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးတက်ခဲ့သည်။
China Passenger Car Association ၏အဆိုအရ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီ မှ April ပြီလ အထိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင် အသစ် ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် ၏စုစုပေါင်း ရောင်းအား သည် ၂. ၅၆ သန်း ရှိခဲ့ပြီး အလားတူ ကာလအတွင်း တရုတ် စျေးကွက် သည် ၁. ၅၃ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ စုစုပေါင်း၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး ရှိသည်။ ၇ နှစ် ဆက်တိုက် တရုတ်သည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုတွင် နံပါတ် တစ် နေရာတွင် ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ဈေးကွက် ဖြစ်လာသည်။